के तपाई भाडाको घरमा बस्नुहुन्छ ? त्यसो भए यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ०२, २०७५१०:३८
काठमाडौँ । वास्तुशास्त्र अनुसार कुनै नयाँ घरमा बस्नुपर्छ भने त्यो घरबाट केही लाभ लिन केही कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ तर यो कुरा भाडामा बस्न सम्भव हुन्न । वास्तुशास्त्रको प्रभाव घर मालिकलाई मात्र हैन त्यो घरमा बस्ने जो कोहीलाई पर्न सक्छ ।
वास्तुशास्त्र विशेषज्ञको अनुसार जुन भवनमा बसेको छ त्यसको प्रभाव जो कोहीलाई पर्न सक्छ । चाहे त्यो व्यक्ति घरमा बसोस या भाडामा भवनको प्रभाव पर्छ नै । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई कुनै घरमा भाडामा बस्नु पर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरुका बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
१.प्रवेश द्वार : यदि तपाई कुनै घरको कोठामा बस्नु भएको छ भने त्यो घरको प्रवेशद्धारको प्रभाव तपाईमा परिरहेको हुन्छ । यदि तपाई बसेको घरको ढोका दक्षिण दिशाको तेस्रो स्थनामा रहेको भने त्यसको अत्यन्त धन एवंम् यशको कारण बन्न सक्छ । एक भवनमा ३२ प्रवेशद्धार रहेको छ भने कुनै राम्रा र नराम्रा प्रभाव पर्ने खालको हुन्छ । यदि तपाई बसेको घरको प्रवेशद्धार गलत रहेको छ भने उपयुक्त रंग लगाएर द्धारको कुरुपप्रभाव हटाउन सक्नुहुनेछ ।
२.कोठाको दिशा : यदि तपाई वास्तुशास्त्रको तथ्यलाई बुझनुहुन्छ भने घरको प्रत्येक कोठा आर्दश दिशामा निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक कोठाको १६ दिशामै प्रभाव रहेको वास्तुशास्त्रमा बताइएको छ । भाडामा घर लिएर बस्ने बेलामा बेडरुम शौचालय आदर्श दिशामा रहेको रोज्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने घरको भित्ताको रंग फलदानी जस्ता वस्तु राखेर कोठाको प्रभावलाई हटाउन सकिन्छ ।
वस्तु राख्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा : यदि तपाई फोटोग्राफ्ट पेन्टिग्स डेकोरेशन जस्ता वस्तुहरु सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईले भाडाको घरमा बसेर पनि वास्तुशास्त्रको सही सदुपयोग गरेर सुख शान्ती समृद्धी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।